Maxamed Salaax: Muxuu sidan degdega ah ugu soo caanbaxay? - BBC News Somali
Maxamed Salaax: Muxuu sidan degdega ah ugu soo caanbaxay?
Image caption Mo Salaax 48 kulan oo uu xilli ciyaareedkan u saftay Liverpool ayuu ugu dhaliyay 43 gool
Xilli ciyaartoyda ay si weyn u dabaaldegeen kaddib markii ay 4-0 uga badiyeen koxoda ENPPI, ayuu hareeraha eegay tababare Saciid Al Shesheni waxa uuna ogaaday in xubin ka mid ah ciyaartoyda ay da'dooda ka yar tahay 16-ka sano ee kooxda Al-Mokawloon uusan ku faraxsanayn tartanka ka soconaayo Qaahira.
Ciyaartoygaasi ayaa ka niyad jabay in magaciisa uusan ku jirin ciyaartoyda afarta gool u dhalisay kooxda.
Waxa uu ka dheelayay dadabka dambe ee bidixe marka aad ayey ugu adkeyd inuu saameynta uu doonayay ciyaarta ku sameeyo.
Waxa uu ka soo jeeday deegaanka Nagrig oo ah tuulo 130 km u jirta magaalada caasimadda u ah Masar ee Qaahira, waxa uuna maalintii safri jiray 9 saacadood, mararka qaar waxa uu isku kala badeli jiray 10 bas, si uu u soo tababarto una soo dheelo.
Iyadoo uu rabitaankiisa uu tixgalinaayo ayuu Al Shesheni waxa uu ciyaaryahankan siiyay fursad uu horay uga dheelo,
Ciyaaryahanka la hadlayaa waa Maxamed Salaax, kaas oo aanan mar dambe dib soo eegin kuna sii socday dhabihii uu jeclaa.
Image caption Ciyaaryahankan u dheela Liverpool ayaa gaday garoon cusub oo ku yaal iskuulkiisii hore ee Nagrig
Taasna waxa ay qeyb ka aheyd jawaab laga bixiyay su'aal aheyd sida uu Maxamed Salaax heerkan ku soo gaaray, kaas oo markii hore ay ku adkeyd inuu soo jiito kooxaha waa weyn ee ka dheela horyaallada heerka sare ee Yurub, si la yaab leh ayuuna markii dambe ku noqday gooldhaliye aanan la hakin karin oo weliba lala barbar dhigo ciyaartoyda Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Ciyaartoyda Kubadda Cagta waxaa horumarkooda aad u caawiya inay helaan meel wanaagsan oo ay ka dheelaan iyo waqti habboonba, oo muhiimmadu ma ahan kooxda iyo heerka, sababtoo ah qofka noocaas ah marnaba ma qarsoomo.
Hasayeeshee dad yar ayaa middaasi maanka ku hayay markii ay Liverpool ku dhawaaqday in Salaax ay kala soo wareegtay kooxda Rome ee waddanka Talyaaniga.
Waxaa iyana muhiim ah in Masar aanay ahayn waddan awood weyn ku leh kubadda cagta caalamka, walow qaaradda Afrika ay aad uga dhex muuqato, maadaama ay todoba jeer ku guulaysatay Koobka Qaramada Kubadda Cagta ee Afrika.
Image caption Masar ayaa laba jeer oo hore waxa ay u soo baxday Koobka Kubadda Cagta Adduunka sidoo kalana waxa ay ka qeyb qaadan doontaa Koobka Adduunka ee Ruushka ka dhici sanadkan 2018
Mo Saalax ayaa hore uga soo dheelay waddanka Switzeland, kaas oo horyaalka laga dheelo uusan u adkeyn sida midka Ingiriiska oo kale.
Ingiriiska markuu yimid oo uu Chelsea ku soo biiray xaaladdiisu ma aysan isku toosin oo ciyaartoy xirfadlayaal ah ayuu kula tarmayay booska uu ka dheelo, markaas kaddibna aad ayey ugu adkeyd inuu isku muujiyo José Mourinho.
Salaax waxa uu kooxda Chelsea u dheelayay 19 kulan waxa uuna u dhaliyay 2 gool oo kaliya, iyadoo laba ciyaar oo kaliyana uu 90 daqiiqo dheelay.
Kaddibna Salaax waxaa amaah laba jeer ah lagu siiyay kooxo Talyaaniga ka dhisan ka hor inta uusan Roma toos ugu wareegin xilli ciyaareedkii 2015/16.
Salaax fursad ayey middaasi u aheyd oo waa uu isku soo saaray kaddib markii uu 34 gool u dhaliyay kooxdiisii Roma kaddibna uu uga soo wareegay kooxda Liverpool.
Image caption Salaax si wanaagsan uma dheelin intii uu Mourinho ka hoos dheelayay ee uu Chelsea ka tirsanaa markaas oo 19 kulan oo uu u saftay uu u dhaliyay 2 gool oo kaliya
Dhawaan mar uu garoonka Anfield ee ay ku dheesho kooxda Liverpool uu booqday Mourinho, oo haatan ah tababaraha kooxda Manchester United, ayaa la arkay isagoo shafka galinaya ciyaaryahankan u dhashay dalka Masar.
Wareysi uu siiyay ESPN-ka Brasil ayuu markii ugu horreysay waxa uu Mourinho kaga hadlay xiriirkii ciyaaryahankan kala dhaxeeyay.
Image caption Waxaad mooddaa in Salaax ay wax walba isugu tooseen markuu Liverpool yimid
Goolasha uu Salaax dhaliyay 2017/18 ayaa ah ku uusan ciyaartoyda laf ahaantiisa maankaba gelin, oo 48 kulan oo uu u dheelay kooxda Liverpool ayuu xilli ciyaareedkan waxa uu u dhaliyay 43 gool 15 gool oo kalana isagaa dhiibay.
Waxa uu qeyb muhiim ah u ahaa ololaha kooxdiisa ay guulaha uga soo hoysay Koobka Horyaallada Yurub ee Champions League-ga kaas oo kooxdiisa aanay natiijo wanaagsan ka gaarin tan iyo 2007-dii.
Image caption Salaax ayaa ciyaarihii loogu soo baxayay Koobka Adduunka waxa uu xulka Masar u dhaliyay 5 gool
Qaab ciyaareedka Salaax ayaa si aanan la filayn sare ugu soo kacay.
Bishii Maarso 2012-kii ciyaaraha kubadda cagta ee Masar ayaa waxaa soo wajahay qulqulatooyin oo waxaa la hakiyay horyaalka dalkaasi, kaddib markii ay musiibo ka dhacday garoonka Port Saciid halkaas oo bishii ka horreysay ay ku dhinteen 70 qof 500 oo kalana ay ku dhaawacmeen.
Ciyaartoydii ay Salaax ka wada tirsanaan jireen kooxda Basel ayaa waxa ay xasuustaan sida ciyaaryahanka uu kurisga keydka u fadhin jiray.
Sanadkiisii ugu horreeyay waxaa uu ciyaarta ku soo geli jiray badel, oo 10 ka mid ah 29-kii kulan ee uu kooxdaasi u saftay ayuu garoonka ku qaatay wax ka badan hal saac.
Image caption Mo Salaax ayaa waxa uu kooxda Basel ku biiray 2012 kaddib markii uu ciyaar iyo ciyaar barkeed oo saaxiibtinimo ah uu la dheelay kooxda ka dhisan waddanka Switzerland
Salaax ayaa dabeecaddiisa wanaagsan markii uu garoonka ku jiro iyo Muslimnimadiisa khaaliska ah ayaa waxa ay sii kordhisay taageerada uu dadka iyo warbaahinta ku dhex leeyahay.
Waxa uu dhisay iskuul iyo isbitaal, magaciisana waxa uu ku caawiyay dhowr xafladood oo gargaar lagu aruurinayay, iyadoo weliba uu mar lacag gaaraysa $280,000 ugu deeqay sanduuq ay dowladda leedahay oo loogu talagalay in lagu kobciyo dhaqaalaha dadka saboolka ah ee Masar.
Image caption Ciyaaryahankan ayaa halyey qaran ka noqday dalka Masar
Ciladda kaliya ee la sheegay in ciyaaryahankan loo hayo ayaa ah in uu si ulakac ah u diiday inuu gacan qaado ciyaartoyda kooxda Maccabi Tel-Aviv ee Israa'iil mar ay ciyaar isaga hor yimaadeen kooxdiisii Basel sanadku markii uu ahaa 2013.
Xilligaas dhowr ciyaaryahan oo u dhalatay dalka Masar ayaa ka soo horjeestay ficilka uu ku dhaqaaqay, oo weliba waxa ay doonayeen in weerraryahanka uusan dheelin lugta labaad ee ciyaartaasi oo ka dhacaysay Israa'iil.